Efa voa vao mihilana… | NewsMada
Efa voa vao mihilana…
Ny loza tsy mampandre raha ho avy ! Saingy raha ny eto Madagasikara, tsy dika fa mamely isan-taona ny oram-pahavaratra, loza voajanahary isan-karazany toy ny rivodoza miteraka tondra-drano. Tsy manampoka intsony ny loza fa efa mandindona mandavantaona. Ny mahavariana anefa, efa antomotra ny fotoam-pahavaratra, mba tsy hilazana hoe efa miantefa, vao mikoropaka mitady izay vahaolana hiatrehana ny mety ho fiantraikany. Efa dibo-drano sahady izao ny faritra iva sasany. Tsy mikoriana araka ny tokony ho izy ny rano noho ny fahatsentsenan’ny lakandrano. Fa angaha tsy azo nodiovina dieny tamin’ny maintany izany e ? Sa efa mihatra ny loza vao manao izany mba ho hitan’ny vahoaka hoe tena miasa ? Tsy hay aloha izay any an’eritreritry ny tomponandraikitra isan-tsokajiny, fa ny zava-misy, toa mitsabo ny takaitran’ny loza voajanahary foana isika fa tsy mba misoroka mialoha. « Tsy ny oran-ko lasa no anjairan-tsarotro, fa ny oran-ko avy », hoy ny fomba fiteny malagasy izay. Izay tsara fiomanana tsy tampohin-doza e !
Toetra tsy dia mendrika nifandovan’ny mpitondra nifandimby teto, ary dimbiasin’ny amin’izao fotoana, ity « manao soro-baton’ilay jamba, ka efa voa vao mihilana » ity. Efa may endim-boanjo vao mikoropaka ary mitsabaka amin’izay tsy tokony hitsabahana ny tomponandraikitra sasany. Hatramin’ny « Raharaha kidnapping » avy, itsingolohana itadiavana hirika. Sa tafiditra tao ka mitady lalan-kivoahana ? Anjaran’ny mpanao fanadihadiana ny mamaly izany, raha sahy tena hamotopototra tokoa izy ireo. Efa tsara fiomanana dieny mialoha koa ny atidoha niketrika iny fakana an-keriny iny ka tsy mataho-doza manampoka. Ho hita eo ny tohin’iny !
Fa mitohy hatrany koa ity asan-dahalo any amin’ny faritra atsimo ity. Mifampitana indray ny mpitandro filaminana sy ny dahalo, tato ho ato. Mandry tsy lavo loha ny mponina : eo ny horohoro amin’ny asa ratsin’ny malaso, fa eo koa ny tebiteby amin’ny afitsoky ny mpitandro filaminana sasany. Ny hany azon’ny sasany atao dia ny miomana ny hifindra lasy amin’ny toeran-kafa. Nefa, toa ahitana sy andrenesana tsy fandriampahalemana avokoa saika manerana ny Nosy. Ho aiza ny vahoaka malagasy raha izany ? Miandry izay higadonany toy ilay Rafotsibe very laona. Na efa mba tsara fiomanana amin’ny fametrahana ny andrimasompokonolona aza, tsy afa-manoatra amin’ny fitaovam-piadiana mahery vaika eny an-tanan’ny jiolahy. Fa avy aiza marina izy ireny e ? Tsy avy amin’ny valalabemandry kosa aloha e !